တရုတ်ရေချွေတာစက်များ၊ စွမ်းအင်ချွေတာသောရေဆေးများ၊ ရေချွေတာပေးသွင်းသူ
SHENZHEN KING OF SUN INDUSTRY CO.,LTD [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer , Trade Company အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , Other Markets , West Europe , North Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်:81% - 90% Cert:ISO9001, CE, Test Report ဖေါ်ပြချက်:ရေချွေတာကိရိယာများ,စွမ်းအင်ထိရောက် Faucets,ရေချွေတာထိပုတ်ပါ,Touch Faucet ကိုနှိပ်ပါ,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > ရေချွေရေဆေး > Control Faucet ကိုနှိပ်ပါ
Control Faucet ကိုနှိပ်ပါ ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, ရေချွေတာကိရိယာများ, စွမ်းအင်ထိရောက် Faucets ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, ရေချွေတာထိပုတ်ပါ R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
Square Type Touch Switch လှုပ်ရှားမှုတိုင်တိုင် Faucet
Self Closing အင်တုံနက်ကိုထိရောက်သောထိတွေ့ထိန်းချုပ်မှုဖြင့်ပြုလုပ်သည်
G1 /2"ကြေးဝါနံရံတပ်ဆင်ထားသည့်ရေချွေတာထိတွေ့ထိန်းချုပ်မှု Faucet
Water Saving Touch သည်တစ်ခုတည်းသောအအေးခံအင်ဂျင်ကိုထိန်းချုပ်သည်
Touch Switch ဖြင့်မီးဖိုချောင်ရေချွေတာသောကြေးဝါ Faucet
အများပြည်သူရေဝှမ်းကွန်ဆာဗေးတစ် Chrome Faucets
One-Touch ထိပုတ်ပါ ၀ င်သောမြစ်ဝှမ်းရေ saver
Touch Switch Basin တစ်ခုတည်းသော Wall-Mount Faucet
ကြေးဝါအင်တုံ Faucet နံရံတွင်တပ်ဆင်ထားသည့် Touch ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ
Switch One ထိပုတ်ပါဖြင့်ရေ Sever
ချက်ပြုတ်သည့်အချိန်တွင်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ချောကျိကျိအမြှုပ်များပါသည့်လက်သည် မီးဖိုချောင် faucets များနှင့်လက်ကိုင်လက်ကိုင်ကိုပြောင်းရန်အသုံးပြုလိမ့်မည်။ ပြီးတော့ Handy ရဲ့မီးဖိုချောင် ထိတွေ့မှုထိန်းချုပ်မှု faucet ကိုလက်ဖဝါး၊ လက်ချောင်းတွေနဲ့နောက်ကျောတို့ကထိတွေ့နိုင်ပါတယ်။ မကြာခဏသော့ခလောက်သည်ရေကိုရပ်တန့်စေနိုင်သည်၊...
Touch Control Faucet နံရံတွင်ဖြောင့်သောစည်အမျိုးအစား Handy's Wall တပ်ဆင်ထားသည့် touch switch faucet ကိုသင်၏လက်ဖြင့်ပေါ့ပေါ့တန်တန်လက်ဖြင့်ရေသည်အလိုအလျောက်စီးထွက်သွားလိမ့်မည်။ သင့်လက်၌ရှိသောဘက်တီးရီးယားများကို သုတ်လိမ်း ပေးမည် ။ Wall Walled Mountin Basin Taps ၏ nozzle ရှိဘက်တီးရီးယားများသည်...
Handy ၏ ရေချွေတာနိုင်သည့် One Touch Control Faucet သည်ကလေးငယ်များအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးအစားအစာကိုကိုင်တွယ်ရာတွင်အထူးသဖြင့်၎င်းသည်ရေထဲတွင်ခလုတ်နှင့်အတူသူ့ဟာသူ semi semi clean လုပ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ dural ကြေးနီမြေထုဆွဲအား faucet shell ကိုသွန်းလောင်းသည်၊ အရောင်တင်ထားသော chrome အရောင်၊...
Handy ၏ G 1/2 လက်မအရွယ်ကိုယ်ထည် Touch Control Faucet သည်ရေကိုသာ NEED လိုအပ်သည်တစ်ခုတည်းဖွင့် / ပိတ်ထားပါ။ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်သည်။ ရေချွေတာခြင်း - ၄၈% အထိ။ Wall Walled Water Saver Taps ၏ဖိအားများ၏အလုပ်လုပ်မှု။ 1.0MPa မှ 0.1MPa ဖြစ်ပါတယ်။ Handy's Water Conservation Faucet...
ရေချွေတာသောကိရိယာများ ပါ ၀ င်သော Handy ၏ Touch Control Faucet သည် ပွင့်လင်းပြီးအနီးကပ်ရေလိုအပ်သည်။ တစ်ချက်တည်းသာရှိသည်။ Hygienic သည် ရေစုပ် စက် တွင်တပ်ဆင်နေသည်။ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကိုလျှော့ချသည်။ Touch Switch Faucet သည်ကလေးငယ်များအတွက် အထူးသဖြင့်အစားအစာကိုကိုင်တွယ်ရာတွင်အသုံးဝင်သည်။ Handy's Water Saving Faucets...
Dural ကြေးနီမြေထုဆွဲအား faucet shell ကိုသွန်းလောင်းသည်၊ အရောင်တင်ထားသော chrome အရောင်၊ တိုက်စားခြင်းနှင့်မှေးမှိန်ခြင်းကိုခုခံသည်။ Handy's Brass Water Saving Faucets သည် အထည် ချည်မျှသာဖြစ်ပြီးပွင့်လင်းပြီးအနီးကပ်ရေတစ်ခုသာရှိသည်။ ရေထိတွေ့မှု - ၄၈% အထိရှိသည်။ Chromed Touch Switch Faucet သည်ကလေးငယ်များ...
နေရာလေးကိုရဲ့ One Touch ထိန်းချုပ်ရေး faucet, အ aerator နောက်ကွယ်ကအယူအဆရိုးရှင်းပါသည်။ အနည်းငယ်သောခလုတ်သည်သင့်အား faucet လက်ကိုင်များကိုမထိဘဲရေစီးဆင်းမှုကိုစတင်ရပ်တန့်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ကလေးများအတွက်ရေချိုးခန်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သူတို့သည်လက်ကိုဆေးကြောခြင်း၊ G1 /2လက်မ ရေချွေတာပုတ် အထီးချည်မျှင်၊...
Handy ® ၏ ကိုယ်ပိုင်ပိတ်ထားသောအင်တုံပုတ်ပါ ကျယ်ပြန့်စွာဖြင့်ဟိုတယ်များ၊ ရုံးအဆောက်အအုံများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကြယ်စင်အဆင့်အများပိုင်အိမ်သာများနှင့်ခေတ်မီအိမ်များရှိသန့်ရှင်းရေးစက်ရုံများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။ Brass Touch Control Faucet သည်ရေ၊...
သန့်ရှင်းရေးနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိမှုနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိမှု Touch Switch Faucet သည်အများသုံးနေရာတွင်ရေချိုးရန်သင့်လျော်သည်။ Touch Control Faucet ကို Chrome သည် အလိုအလျှောက်ပိတ်ထား ပြီးအပြီးသတ် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အသုံးပြုသူသည် aerator ပေါ်ရှိခလုတ်ကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်ထိလိုက်လျှင် ၂ နာရီမှ ၁၀...
ဖောက်သည် - ရေကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ။ Handy - မင်းရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ Touch control faucet ကိုကျွန်ုပ်တို့ ကူညီ ပေးထားတယ် ။ Dural ကြေးနီမြေထုဆွဲအား faucet shell ကိုသွန်းလောင်းသည်၊ အရောင်တင်ထားသော chrome အရောင်၊ တိုက်စားခြင်းနှင့်မှေးမှိန်ခြင်းကိုခုခံသည်။ အ ၀ တ် အထည်ရေချိုးကန် နှင့်ထိတွေ့မှု၊...
G1 /2လက်မချိတ်ဆက်မှုအထီးချည်ဖြင့် Handy's Wall-Mountted Touch Switch Faucet ။ အာကာသပေါ်မှခလုတ်အနည်းငယ်သည်သင့်အား faucet လက်ကိုင်များကိုမထိဘဲရေစီးဆင်းမှုကိုစတင်ရပ်တန့်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ အဆင်ပြေသည်ကဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကိုတားဆီးနိုင်သည်။ ရေချွေတာခြင်း - ၄၈% အထိ။ Water Saver Taps ၏ဖိအား သည် 0.1MPa မှ 1.0MPa ဖြစ်သည်။...
Handy's Touch Switch Faucet သည်ကျောင်းများ၊ ဟိုတယ်များ၊ မီးရထားဘူတာများရှိလူအများအသုံးပြုသည့်အများသုံးအိမ်သာများအတွက်သင့်လျော်သည်။ ၎င်းသည်ဟိုက်ဒရောလစ်နိယာမနည်းစနစ်ကို အသုံးပြု၍ ရိုးရာဝှမ်း faucet ၏လည်ပတ်မှုစနစ်ကိုပါဝါချိတ်ဆက်မှု၊ လုံခြုံမှုနှင့်စွမ်းအင်ချွေတာမှုမရှိပဲပြောင်းလဲသည်။ ။...
ကွန်ဆာဗေးတစ်တစ်ခုတည်းအအေးခံအသာပုတ်။ ကုန်းပတ်တပ်ဆင်ပြီးတပ်ဆင်ထားသည့်အိမ်၊ တပ်ဆင်ခြင်း၊ ရေချိုးခန်းအင်တုံအစိပ်စသည်တို့အတွက်သင့်လျော်သည်။ application များအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အိမ်တွင်ရေထိန်းသိမ်းခြင်း faucet ကိုအသုံးပြုသည်။ ငါးနှစ်တာမှ leakage.Water Saving faucets များသည်ကြာရှည်ခံနိုင်ပြီးချေးသည်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။...
ကိုယ်ပိုင်ပိတ်ထားသောအင်တုံပုတ်များသည်စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းရေစီးဆင်းမှုကိုအလိုအလျောက်ဖွင့်ရန်နှင့်သင်၏လက်များဖြင့်အင်ဂျင်ဝိုင်ထဲရှိမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုထိပါ။ Touch Control Faucet ရေချွေတာခြင်း One ထိပုတ်ပါသောကြေးဝါခရုမ်းကိုယ်ထည်နှင့်သံမဏိရေပိုက်တစ်လုံး။ ထိတွေ့ခလုတ်ခုံသည်ရေကိုအသာပုတ်သည့်နေရာအသစ်ဖြစ်သည်။ Faucets များကို...
ထိတွေ့ထိန်းချုပ်မှု faucet ဒေါင်လိုက်နံရံမျက်နှာအင်တုံပေါက် puckering တပ်ဆင်ခြင်း, မျှတသောရေချွေတာ Aerator, "one touch" switch သည်ရေကို ၄၈% မှ ၈၄% ထိသက်သာစေသည်။ ၅ လွှာအလွှာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောမျက်နှာပြင်၊ ၄၈ နာရီအကြာတွင်တင်းကျပ်သောအပေါ်ယံအားဖြင့် တစ် ဦး တည်းအပေါက်တစ်ပေါက်ဝှမ်း တောက်ပနေဆဲ။...
ထိတွေ့ကိုင်တွယ်နိုင်သော faucet ၊ ကြေးဝါနှင့် chrome ပွတ်အရောင်။ Single Hole Basin Tap ရေညှိနိုင်သည့် Aerator ရေချိုးခန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ "one touch" switch သည်ရေကို ၄၈% မှ ၈၄% ထိလွယ်ကူစွာသိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ သင့်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီသင့်လျော်သောရေထွက်ရှိမှုသို့ထွက်ခွာရုံသာဖြစ်သည်။ Save Water Taps များသည်...
မြို့ရိုးအဝှမ်း Taps တပ်ဆင်ထားသည် ဤရွေ့ကားကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်ရေဘုံဘိုင်ကြေးဝါကိုအဓိကကိုယ်ထည်, ယုံကြည်စိတ်ချရသော p ဏ်ဈ tion နှင့် chrome ချော၏ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ G1 /2လက်မဆက်သွယ်မှုအထီးချည်နှင့်အတူ။ အာကာသပေါ်မှခလုတ်အနည်းငယ်သည်သင့်အား faucet လက်ကိုင်များကိုမထိဘဲရေစီးဆင်းမှုကိုစတင်ရပ်တန့်ရန်ခွင့်ပြုသည်။...
တရုတ်နိုင်ငံ Control Faucet ကိုနှိပ်ပါ ပေးသွင်း
ဖောက်သည် - ရေကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ။
Handy - မင်းရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ Touch control faucet ကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးတယ်။ Dual ကြေးနီမြေထုဆွဲအားအဓိကကိုယ်ထည်၊ အရောင်ခြယ်ထားသောအရောင်၊ တောက်ပမှုကိုတွန်းလှန်ခြင်း။ အထွေထွေချည်ရေချွေတာသည့်လေဆာရောင်ခြည်၊ ထိတွေ့ထိန်းချုပ်မှု၊ ရေထွက်ပေါက် ၄ မျိုး - ရေ၊ ဘွတ်တာရေ၊ ကိုယ်ပိုင်ပိတ်ခြင်း၊ Omni - directional aerator ။ ထုတ်ကုန်၏အလုပ်လုပ်ဖိအား 0.05MPa မှ 0.9MPa ဖြစ်ပါတယ်။ ရေစုဆောင်းနှုန်းမှာ ၄၈% အထိရှိသည်။
Touch Faucet ကိုနှိပ်ပါ